Xisbiga Modaraterna oo noqday xisbiga ugu taageerada badan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Taageerada xisbiga Vänsterpartiet tira-koobkii la sameeyey 16/2 2016. sawir: NOVUS
Xisbiga Modaraterna oo noqday xisbiga ugu taageerada badan
La daabacay måndag 29 februari 2016 kl 16.30
Xisbiga Moderaterna ayay taageeradiisu ka saremartay xisbiga Socialdemokraterna.
halkaasina oo ku noqday xisbiga ugu dhumucda wayn xisbiyada siyaasadda ee dalka. Sida ku cad isu geeyn lagu sameeyey tira-koobyadii ugu dambeeyey oo ey sameeyeen shirkadaha ugu waaweyn ee tira-koobyada. Middaasina oo machadka Novus u sameeyay laanta wararka ee Ekot.
Kolka laga hadleyo xisbiga Socialdemokraterna waa tira-koobkii labaad oo uu xisbigu ku helo taageero ka hooseeysa 25% ee codadka bulshada, waana kaalin u dhiganta middii la oran jiray waa taageero aan wanaag-sanayn muddadii uu xisbiga taladiisa hayay hoggaamiyihii Håkan Juholt.
Carin Jämtin, ahna madaxa xog-haynta xisbiga Socialdemokraterna:
- Wuxuu ahaa sannad aad u dhib badan oo karti badan u baahnaa, sannadkaasina oo xisbigayagu aannu ku guuleey-san in aannu fikirradayada in aannu soo ban-dhigno, oo ey ka mid yihiin shaqa la’aanta, wax-barsho ka wanaag-san iyo sidoo kale in nidaamka hab-nolol wanaagga bulshada la wada gaarsiiyo. Waxaa noo suurtageli waysey in aannu isku xirno su’aalaha socdaalka, shaqada iyo iskuulka.
Xog-hayaha xisbiga Moderaterna Tomas Tobé ayaa sheegay in guusha xisbigu ku hantiyay taageerada ay tahay siyaasadda cusub ee xisbigiisu ka qaatay siyaasadda socdaalka:
- Waxaa kor u sii kacay taageerada bulshadu u hayso xisbiga Moderaterna, maadaama uu dalkani u baahan yahay inuu hakad ka qaato soo-galootiga, si loo sugo dhaqaalaha iyo abuurista shaqooyin sahlan.
Ma waxaad taageereyaal kala soo noqoteen xisbiga Sverigedemokraterna?
- Haa, Xisbiga Moderaterna wuxuu dib u habeeyn ku sameeyay siyaasaddiisii soo galootiga. Iyo in sida aan qabo ey dad badani dareen-san yihiin in xisbiga Moderaterna uu kaga habboon yahay hoggaaminta dalka, kolka loo barbar-dhigo xisbiga Sverigedemokraterna.
Xisbiga Bidixda ayaa isagu ay muuqataa inay taageeradiisu sii kor kordheeyso, isagoona ka kacay 6,9%, gaarayna 7,4%. Halka ey taageerada xisbiyada kale aannu ku dhicin is-bedel la taaban karo.
Taageerada xisbiga Sverigedemokraterna ayaa hoos u dhacday gaartayna 18%, halka ay horay u gaarsiisnayd 19%.
Kolka la eego gara taageerada ey garabyada xisbiyadu ku kala heleen saadaalinta tira-koobka ayuu garabka midig ee Alliansen-ku weli hoggaanka ku haystaa, iyadoona kolka la isu geeyo ey 4% dheer-yihiin garabka Casaan-cagaarka.